Neymar Iyo Ronaldo Oo Ku Dagaallamaya Rikoor Ay Ka Dhigayaan Champions League | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Neymar Iyo Ronaldo Oo Ku Dagaallamaya Rikoor Ay Ka Dhigayaan Champions League
(05-12-2017) Labada xiddig ee Neymar iyo Cristiano Ronaldo ayaa ku dagaallamaya rikoodh cusub oo ay u dhigaan tartanka Champions League wareegga koowaad ee groupyada, kaas oo shantii ciyaarood ee ugu horreysay uu mid walba goolal dhaliyey.
Haddii uu Cristiano Ronaldo gool ama ka badan ka dhaliyo ciyaarta Borussia Dortmund ee toddobaadkan, sidoo kalena uu Neymar kooxdiisa PSG goolal u dhaliyo ciyaarta Bayern Munich, waxay noqon doonaan labadii ciyaartoy ee ugu horreeyey ee taariikhda tartanka Champions League goolal dhaliya lixdii ciyaarood ee ugu horreeyey.
Laacibka reer Portugal ee Ronaldo ayaa hoggaaminaya gool-dhalinta horyaalka isagoo dhaliyey siddeed gool shan ciyaarood oo uu saftay, halka uu ciyaartoyga dunida ugu qaalisan ee Neymar uu dhaliyey lix gool.
Neymar waxa uu ka caawiyey kooxdiisa PSG inay rikoodh cusub u dhigto Champions League, waxaanay shantii ciyaarood ee ugu horreeyey dhalisay 24 gool.
Goolashii ugu badnaa ee laga dhaliyey Champions League heerka groupyada
Lionel Messi 60 gool
Cristiano Ronaldo 59 gool
Karim Benzema 40 gool
Zlatan Ibrahimovic 32 gool
Raul González 29 gool
Edinson Cavani 26 gool
Sergio Aguero 25 gool
Didier Drogba 25 gool
Robert Lewandowski 25 gool
Ruud van Nistelrooy 25 gool